အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ၏လိင်မှု - မြင့်မားသောလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာအထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာရောဂါရှိသည့်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက် hypersexual နှင့် paraphilic အပြုအမူ (၂၀၁၇) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn
အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာအတွက်လိင်: High-လည်ပတ်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ spectrum ကိုရောဂါ (2017) နဲ့အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက် hypersexual နှင့် paraphilic အပြုအမူ
ဆွေးနွေးမှုများကို Clin neuroscience။ 2017 ဒီဇင်ဘာ; 19 (4): 381-393 ။
ဒံယလေသSchöttle, စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့် Psychotherapy ဌာန, တက္ကသိုလ် Medical Center မှဟမ်းဘတ်-Eppendorf, ဟမ်းဘတ်, ဂျာမနီ,
Briken Peer, MD
Briken, လိင်သုတေသနနှင့်ဥပဒေရေးရာစိတ်ရောဂါကုသမှုများအတွက်အင်စတီကျု, တက္ကသိုလ် Medical Center မှဟမ်းဘတ်-Eppendorf, ဟမ်းဘတ်, ဂျာမနီ Peer;
အိုလီဗာTüscher, စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့် Psychotherapy ဌာန, တက္ကသိုလ် Medical Center မှ Mainz, Mainz, ဂျာမနီ,
ဒံယလေသ Turner, MD, Ph.D
ဒံယလေသ Turner, လိင်သုတေသနနှင့်ဥပဒေရေးရာစိတ်ရောဂါကုသမှုများအတွက်အင်စတီကျု, တက္ကသိုလ် Medical Center မှဟမ်းဘတ်-Eppendorf, ဟမ်းဘတ်, ဂျာမနီ, စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့် Psychotherapy ဌာန, တက္ကသိုလ် Medical Center မှ Mainz, Mainz, ဂျာမနီ,
nonaffected လူကြီးများလိုပဲအထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာရောင်စဉ်ပုံမမှန် (ASDs) နဲ့တဦးချင်းစီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏တစ်ခုလုံးကိုအကွာအဝေးပြသပါ။ သို့သော်ကြောင့်လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှု, အာရုံခံ hypo- နှင့် hypersensitivities အတွက်လိုငွေပြမှုနှင့်ထပ်တလဲလဲအပြုအမူတွေအပါအဝင်ရောဂါရောင်စဉ်၏အဓိကရောဂါလက္ခဏာတွေမှအချို့ ASD တစ်ဦးချင်းစီ quantitative အထက်တွင်-ပျှမ်းမျှသို့မဟုတ် nonnormative လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့အကျိုးစီးပွားဖွံ့ဖြိုးပေလိမ့်မည်။ High-functioning ASD တစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်အပေါ်သက်ဆိုင်ရာစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်ကျနော်တို့သာမန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လေ့လာမှုကနေ ASD တစ်ဦးချင်းစီအတွက် hypersexual နှင့် paraphilic စိတ်ကူးယဉ်နှင့်အပြုအမူများ၏အကဲဖြတ်အကြောင်းကိုသူတို့၏အကြိမ်နှုန်းအပေါ်ဝတ္ထုတွေ့ရှိချက်ကိုတင်ပြ။ ASD နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီယေဘုယျ-လူဦးရေလေ့လာမှုများအကြံပြုထက်ပို hypersexual နှင့် paraphilic စိတ်ကူးယဉ်နှင့်အပြုအမူရှိသည်ဖို့ပုံရသည်။ သို့သော်ဤမကိုက်ညီအဓိကအား ASD နှင့်အတူအထီးသင်တန်းသားများကိုများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကမောင်းနှင်နေသည်။ ဤသည် ASD နှင့်အတူအမျိုးသမီးတွေများသောအားဖြင့်ပိုပြီးလူမှုရေးအရအဆင်ပြေအောင်နေကြဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်နှင့်လျော့နည်း ASD symptomatology ကိုပြသနိုင်ပါတယ်။ ASD လူနာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်ပိုင်ထိုက်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးနှင့်ကုထုံးချဉ်းကပ်မှုအတွက်နှစ်ဦးစလုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။
keywords: Asperger syndrome ရောဂါ, အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ, hypersexual ရောဂါ, hypersexuality, paraphilia, paraphilic ရောဂါ, လိင်
အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာရောင်စဉ်ပုံမမှန် (ASD) လူမှုရေးအပြန်အလှန်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်ချို့ယွင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိကြသည့်အခြေအနေများ၏သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောအုပ်စုအဖြစ်ထပ်တလဲလဲနှင့်ကျပုံစံအကျိုးစီးပွားနှင့်အပြုအမူပါဝင်ကြောင်း neurodevelopmental မမှန်ဖြစ်ကြသည်။1 နားဆင်နိုင်ပါတယ်ပျံ့နှံ့နှုန်း ASD ရောဂါခံရပိုပိုပြီးလူကြီးများနှင့်အတူ, (1% တစ်သက်တာပျံ့နှံ့အထိ) မကြာသေးမီဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းသိသိသာသာမြင့်တက်ခဲ့ပါပြီ။2 ဒါဟာယောက်ျား-to-အမျိုးသမီး-အချိုး3မှ4နှင့် 1 အကြားကြောင်းယူဆနေသည်3 နှင့် ASD အတွက်အထူးသဖြင့်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်တည်ရှိ။4 ASD နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ၏တစ်ဝက်နီးပါးဥာဏ်ရည်ချို့ယွင်းမဟုတ်နှင့်အခြားသူများ၏ရှုထောင့်ကိုမြင်လျှင်နှင့်အလိုလို nonverbal နားလည်သဘောပေါက်အတွက် (ထိုကဲ့သို့သော High-functioning အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာသို့မဟုတ် Asperger syndrome ရောဂါနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကဲ့သို့) ပုံမှန်သိမြင်မှုနှင့်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှု, လူမှုရေးအပြန်အလှန်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးလိုငွေပြမှုနှင့်အခက်အခဲများရှိပေမယ့် လူမှုရေးတွေကိုရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ဆက်ဆံရေးများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဝှကျထားအတားအဆီးပါဝင်သည်။5,6 အထူးသဖြင့်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်တွင် ASD တစ် ဦး ချင်းစီ၏လူမှုရေးစွမ်းရည်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်လူမှုရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီနိုင်သည့်အပြင်အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုဖော်ထုတ်ရန်စိန်ခေါ်မှုများသည်အထူးသဖြင့်ထင်ရှားလာသည်။7
အဆိုပါ၏တတိယ edition အတွက်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ၏တရားဝင် entry ကိုအပြီးအကြောင်း 10 နှစ်ပေါင်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲ (DSM-III ကို) 1980 အတွက် ASD နှင့်အတူလူနာများ၏လိင်အပေါ်ပထမဦးဆုံးစနစ်တကျလေ့လာမှုများထုတ်ဝေခဲ့ကြသည်။8-11 ASD တစ်ဦးချင်းစီ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများအပေါ်သုတေသနပြု၏လက်ရှိပြည်နယ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေ, ဒါမှမဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာအခြားသူများကိုမကျင့်စဉ်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု (HCs) မှခြားနားချက်များကိုရှာတွေ့အချို့လေ့လာမှုများနှင့်အတူမဟုတ်ဘဲရောထွေးဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ရောဂါလှိုင်းများ၏သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောသဘောသဘာဝနှင့်လေ့လာမှုများများ၏မတူကွဲပြားသိပ္ပံနည်းကျနည်းစနစ်များ, ဒီအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ယခင်လေ့လာမှုများပါပြီ: (ဈ) ယူဆရပိုပြီးချို့ယွင်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအဘို့လျော့နည်းအခွင့်အလမ်းများနှင့်အတူလူနေအိမ် setting တွင်အမျိုးသမီးနှင့် / သို့မဟုတ်အထီးလူနာပါဝင်သည်; (ii) ဖြင့်သဖွငျ့သက်ရောက်မှုမှဦးဆောင်ဉာဏချို့ယွင်းသို့မဟုတ်အခြား comorbid ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်; (iii) သာ Higher-functioning တစ်ဦးချင်းစီတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူသောအွန်လိုင်းစစ်တမ်းများကိုအသုံးပြု; (ဃ) မိသားစုဝင်များနှင့်စောင့်ရှောက်မှု-လှူထံမှဒါမှမဟုတ်လူနာသူတို့ကိုယ်သူတို့ထံမှအစီရင်ခံစာများအပေါ်မှီခို; နှင့် (v) ကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားအတွက် ASD နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအကဲဖြတ်။
ဒီလေ့လာမှုတွေ ASD နှင့်အတူများစွာသောတစ်ဦးချင်းစီ non-ASD လူဦးရေဆင်တူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးရှာသောအကြံပြု12,13 နှင့်လိင်အတွေ့အကြုံများကိုနှင့်အပြုအမူ၏တစ်ခုလုံးကိုရောင်စဉ်ရှိသည်။12-18 သို့သော် ASD နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအကြောင်းကိုအများအပြားကျပုံစံနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းယုံကြည်ချက်လူမှုရေးနှင့်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးနှင့် asexual အဖြစ် uninterested အဖြစ်သူတို့ကိုရည်ညွှန်းပြီးနေဆဲရှိပါတယ်။10,19,20 စားပွဲတင်ငါ Self-အစီရင်ခံစာမေးခွန်းများ၏အခြေခံပေါ်မှာ, High-လည်ပတ်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာနှင့်အတူငယ်ရွယ်နှင့်အထက်လူကြီးများအတွက်လိင်၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်အကဲဖြတ်လေ့လာမှုများခြုံငုံသုံးသပ်တင်ပြသွားပါသည်။11,12,15,21-33 သူတို့ရဲ့နည်းစနစ်ဤနေရာတွင်တင်ပြလေ့လာမှုများတွင်အသုံးပြုသုတေသနချဉ်းကပ်ဖို့ကိုက်ညီသောကွောငျ့ကြှနျုပျတို့အထူးသညျဤလေ့လာမှုများအပေါ်စာပေပြန်လည်သုံးသပ်အာရုံစူးစိုက်။ အတွက်တင်ပြအဆိုပါလေ့လာမှုများ စားပွဲတင်ငါ လိင် ASD တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ကိစ္စမရှိ, ထိုသို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများနှင့်အပြုအမူ၏မြေတပြင်လုံးရောင်စဉ်ဒီအုပ်စုကိုယ်စားပြုကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာကြောင်းအတည်ပြုပါ။11-13,15,20-31
စာပေခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ မှတ်ချက်: ", လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဟာ" "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ", "လိင်," "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ," "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ," အောက်ပါဝေါဟာရများကိုစနစ်တကျစာပေရှာဖွေရေးအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည် ...
အဆိုပါယခုတိုင်အောင်လက်ရှိသုတေသနအများစုဟာယောက်ျားအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ထားပါတယ်များနှင့်အနည်းငယ်လေ့လာမှုများ, လူမှုရေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်သိမြင်မှု domains များကိုရည်မှတ်ကျား-တိကျတဲ့ပြဿနာများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြပါပြီ, ပင်နည်းပါးလာလေ့လာမှုများ ASD နှင့်အတူအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်လွတ်လပ်စွာလိင်ဆန်းစစ်တည်ရှိ။12,13,20,32 အနည်းငယ်လက်တွေ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်32 စနစ်တကျလေ့လာမှုများ၏သေးငယ်တဲ့အစုကို ASD နှင့်အတူအမျိုးသမီးတွေဒီထက်သိသာလူမှုရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးလိုငွေပြမှုကိုတင်ပြခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏သက်တူရွယ်တူအုပ်စုများ၏အကျိုးစီးပွားပိုမိုသဟဇာတဖြစ်ကြောင်းအထူးအကျိုးစီးပွားရှိစေခြင်းငှါ, ဖော်ပြသည်။33-36 ထို့အပွငျ ASD နှင့်အတူအမျိုးသမီးတွေထိုကဲ့သို့သောထို့ကြောင့်ပိုပြီးလူမှုရေးအရအတားအဆီးဖြစ်ခြင်း, သူတို့ရဲ့ Non-ASD ရွယ်တူများ၏လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုကိုအတုယူအဖြစ်မဟာဗျူဟာများ, ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလျှောက်ထားရန်ပုံရသည်။34 လိင်-related ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း ASD နှင့်အတူအမျိုးသမီးတွေ ASD နှင့်အတူယောက်ျားလုပ်ပေးထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအတွက်လျော့နည်းကောင်းစွာခံစားခြုံငုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများဆင်းရဲတဲ့အဆင့်ဆင့်ရှိသည်ဖို့ပုံရသည်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးသို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားမှုတစ်သားကောင်ဖြစ်လာပိုမိုအန္တရာယ်မှာလည်းဖြစ်ကြသည်။37 ASD နှင့်အတူယောက်ျားတိုက်ပိတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တွေ့ရှိခဲ့သည်,11-14,18,37 အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးများအတွက် သာ. ကြီးမြတ်အလိုဆန္ဒရှိသည်20; သို့သော် ASD နှင့်အတူအမျိုးသမီး, နိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒရှိခြင်းရှိနေသော်လည်းပိုမိုမကြာခဏ dyadic ဆက်ဆံရေးအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံအချို့သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။13
ASD ရှိသူများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများနှင့်ဆက်ဆံမှုများကိုရှာဖွေသော်လည်းအချစ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းသည်လူမှုရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးစွမ်းရည်များနှင့်မရောနှောသောသို့မဟုတ်သိမ်မွေ့သောအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများကိုနားလည်ရန်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနားလည်ရန်အခက်အခဲများကြောင့်များစွာအကျိုးသက်ရောက်သည်။ နှင့်အခြားသူများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများဥပမာ - စိတ်ခံစားမှုများ၊ လိုအင်ဆန္ဒများ၊6 ထို့အပွငျ ASD နှင့်အတူများစွာသောတစ်ဦးချင်းစီထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့မိမိတို့၏အမူအကျင့်ပိုင်ထိုက်သောကြာသည်ဟုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးမခံမယူကြဘူး, သူတို့ကလူမှုရေးရင်းမြစ်များမှလိင်အပေါ်သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်လျော့နည်းဖွယ်ရှိဖြစ်ကြသည်။5,22,38
စဉ်းစားရန်နောက်ထပ်အချက်ကလေးဘဝအတွက် nonsexual ဖြစ်ရသော, အကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ထပ်တလဲလဲအကျိုးစီးပွားဒါပေမယ့်အသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့်လူကြီးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ပြင်မကြာခဏဖော်ပြခဲ့သည်အာရုံခံစိတ်တွေ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံဆက်စပ်အတွက်အာရုံခံလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုလွန်တုံ့ပြန်သို့မဟုတ် underreaction ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။39 hypersensitive တစ်ဦးချင်းစီအတွက်, ပျော့ပျောင်းသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိမနှစ်မြို့ဖွယ်အဖြစ်ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်; အခြားတစ်ဖက်တွင်, hyposensitive တစ်ဦးချင်းစီနှိုးဆော်ခြင်းတဲ့အတွက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေမှတဆင့်အော်ဂဇင်ရောက်ရှိအတွက်ပြဿနာများရှိနိုင်ပါသည်။20 အတူတူယူရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်အတွေ့အကြုံများကိုရှိခြင်းများအတွက်ကန့်သတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာနှင့်အငယျဆုံးသောစက်ရုံနဲ့ပေါင်းစပ် ASD ၏အဓိကရောဂါလက္ခဏာတွေစိန်ခေါ်မှုသို့မဟုတ်ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲဖို့ ASD နှင့်အတူအချို့သောတစ်ဦးချင်းစီ predispose နိုင်,22,38 ထိုကဲ့သို့သော hypersexual နှင့် paraphilic အပြုအမူတွေ, ပင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့သူအဖြစ်။
ကွဲပြားခြားနားသောဝေါဟာရများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်အဆက်မပြတ်နှင့် hypersexuality အပါအဝင် quantitative အထက်တွင်-ပျမ်းမျှအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဤဆောင်းပါး၌, ငါတို့ quantitative အတော်လေးမကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အမူအကျင့်ကိုရည်ညွှန်းစည်းကမ်းချက်များ hypersexual အပြုအမူသို့မဟုတ် hypersexuality ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။40,41 သို့သော်တဦးတည်း quantitative အထက်တွင်-ပျမ်းမျှအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏မျှသာရှိနေခြင်း (hypersexual ရောဂါသို့မဟုတ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါကဲ့သို့) တစ်ဦးစိတ်ရောဂါရောဂါ၏တာဝနျကိုများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီပါဘူးသတိပြုပါသင့်ပါတယ်။ Kafka တစ် hypersexual ရောဂါရောဂါအတှကျအအဖြေရှာတဲ့စံတွင်ထည့်သွင်းမည်အကြောင်းအဆိုပြု DSM-5 ။ 40 ဤရွေ့ကားစံ, မှုများထပ်တလဲလဲနှင့်ပြင်းထန်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်အဖြစ် hypersexual ရောဂါသတ်မှတ်တိုကျတှနျးထား, သို့မဟုတ်အနည်းဆုံး6လကျော်ကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ, ဆေးခန်းသိသိသာသာဒုက္ခဆင်းရဲဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနှင့်အခြားဝတ္ထုများသို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများကြောင့်မဟုတ်, ဒါ့အပြင်တစ်ဦးချင်းစီအနည်းဆုံးအသက် 18 နှစ်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။40,42 ရိဒ်နဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် hypersexual ရောဂါ validly နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဤသူအဖြေရှာတဲ့စံ၏အသုံးပြုမှုမှတဆင့်အကဲဖြတ်စေခြင်းငှါပြခဲ့ကြပေမဲ့လည်းအမေရိကန်စိတ်ရောဂါအစည်းအရုံးသို့ရာတွင်၏ Cross-ယဉ်ကျေးမှုအကဲဖြတ်အကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာမှုများတောင်းဆိုကြောင့်သုတေသန၏နေဆဲမလုံလောက်ပြည်နယ်၏ထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုမှုပယ်ချ ကိုယ်စားလှယ် epidemiological လေ့လာမှုများအဘို့နှင့် etiology အပေါ်လေ့လာမှုများနှင့်ဆက်စပ်ဇီဝဗေဒ features တွေများအတွက်ရောဂါ။43
၏အဆိုပြုဒသမထုတ်ဝေများအတွက် ရောဂါ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခွဲခြားရေး (ICD-11), အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ၏ရောဂါများအတွက်အောက်ပါချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်41 ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်ရှိသည်:
အတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါသည်မဆုတ်မနစ်ထိန်းချုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်ခြင်းမရှိသောခံစားမှုများကိုတွန်းလှန်။ ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သောလိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများသို့မဟုတ်တိုက်တွန်းချက်များဖြင့်ထပ်ခါတလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများသို့ ဦး တည်သွားစေသည်။ ထို့အပြင်လိင်လှုပ်ရှားမှုများသည်လူ၏ဘဝ၏ဗဟိုအချက်အချာဖြစ်လာခြင်းကဲ့သို့သောထပ်ဆင့်ညွှန်ကိန်းများကဲ့သို့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလျစ်လျူရှုခြင်းခံရသည်။ နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှုသို့မဟုတ်အခြားလုပ်ဆောင်မှုများ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုထိန်းချုပ်ရန်သို့မဟုတ်လျှော့ချရန်မအောင်မြင်သောကြိုးပမ်းမှုများ (သို့မဟုတ်) ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များ (ဥပမာ - ဆက်ဆံရေးပြတ်တောက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်အကျိုးဆက်များ၊ ကျန်းမာရေးအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ) ရှိသော်င်ထပ်ခါတလဲလဲလိင်ဆက်ဆံမှုပြုမှုများတွင်ဆက်လက်ပါ ၀ င်ခြင်း။ တစ် ဦး ချင်းစီ၏အတွေ့အကြုံများသည်လိင်မှုကိစ္စမတိုင်မီချက်ချင်းပင်တင်းမာမှုသို့မဟုတ်အကျိုးသက်ရောက်စေမှုနှိုးဆွမှုကိုတိုးပွားစေပြီး၊ လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်အပြုအမူပုံစံများသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ မိသားစု၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊
paraphilias ပတ်သက်. နှင့်တကွ, DSM-5 ယခုဖြင့်အခြားသူများအားတစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်အန္တရာယ်မှဒုက္ခဆင်းရဲသို့မဟုတ်ချွတ်ယွင်းစေမ nonnormative လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားနှင့်အပြုအမူတစ်ခု destigmatization မှာရည်မှန်း, paraphilias နှင့် paraphilic မမှန်ခွဲခြားပေးသည်။42 ထဲမှာ DSM-5, paraphilias တွေ့မြင် ( "phenotypically ပုံမှန်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင့်ကျက်, ဖှလူ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်အင်္ဂါဆွသို့မဟုတ်ကြိုတင် fondling အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားထက်အခြားမည်သည့်ပြင်းထန်သောနှင့်ဇွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှု" အဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါတယ် ထောင့်ကွက် 1 တွင်ထည့်သွင်း paraphilic မမှန်များ၏စာရင်းကိုများအတွက် DSM-5) ။ 44 ထဲမှာ paraphilic မမှန်များအတွက်အဆိုပြုစံပေမယ့် ICD-11 ယင်းသူတို့တူ DSM-5, အဲဒီနှစျခုအဖြေရှာတဲ့လက်စွဲအကြားတဦးတည်းကိုအဓိကခြားနားချက်အဓိကအားဒုက္ခဆင်းရဲသို့မဟုတ် functional ဖြစ်စေချွတ်ယွင်းနဲ့ဆက်စပ်သူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်မဖြစ်ကြောင်းအပြုအမူတွေဖှ၏အခြေခံပေါ်မှာရောဂါ paraphilic မမှန်များ၏ဖယ်ရှားရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကမှဦးဆောင် ICD-11 fetishistic, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ masochism ၏ထုတ်ပယ်ခြင်းနှင့် transvestic ရောဂါ,41,45 ASD တစ်ဦးချင်းစီအတွက်သတင်းပေးပို့ခဲ့ကြကြောင်းအပြုအမူ။
ထောင့်ကွက် 1 ။ လက်ရှိအဖြေရှာတဲ့လက်စွဲတွင်ထည့်သွင်း paraphilic မမှန်များ၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။
Fetishistic ရောဂါ *
• nonliving တ္ထုနှင့်အတူကစားမှတဆင့်လိင်စိတ်နိုးထ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ masochism ရောဂါ *
•ခညျြနှောငျခံရသဖြင့်လိင်စိတ်နိုးထ, ရိုက်နှက်, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုသို့မဟုတ်အရှက်ခံရဖို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ sadism ရောဂါ
Transvestic ရောဂါ *
• prepubescent ကလေးများမူလတန်းသို့မဟုတ်သီးသန့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှု။
အပြုအမူတွေကိုဖှနှင့်များသောအားဖြင့်အခြားသူများကို nonconsenting ပါဝင်မဟုတ်, ဒုက္ခဆင်းရဲသက်သက်သို့မဟုတ် functional ဖြစ်စေချွတ်ယွင်းနဲ့ဆက်စပ်သူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်မဖြစ်ကြပါဘူးအပေါ်အခြေခံပြီးဖြစ်ကြောင်း * တှေးတောဆငျခွခွအေနမြေား။ အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders ၏ခွဲခြားရေးနှင့်လိင်ကျန်းမာရေးအပေါ်အလုပ်အဖွဲ့မှဤအခြေအနေများကိုဖယ်ရှားအဆိုပြုလိုက်ပါတယ် ICD-11 ။
ဒါဝေးကိုသာအနည်းငယ်လေ့လာမှုများ ASD နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် hypersexual သို့မဟုတ် paraphilic အပြုအမူတွေကိုအကဲဖြတ်ကြပါပြီ, သူတို့ထဲကအများစုဟာအလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း ASD တစ်ဦးချင်းစီအကြောင်းကိုသတင်းပို့ကိစ္စတွင်အစီရင်ခံစာများဖြစ်ကြောင်း,46-50 exhibitionistic အပြုအမူတွေ,51 pedophilic စိတ်ကူးယဉ်သို့မဟုတ်အပြုအမူ,52,53 fetishistic စိတ်ကူးယဉ်သို့မဟုတ်အပြုအမူ,54,55 sadomasochism,50 paraphilias ၏သို့မဟုတ်အခြားပုံစံများ။56 သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏အသိပညာရန်, hypersexual နှင့် paraphilic အပြုအမူတွေပေါ်မှာရှိသမျှယခင်လေ့လာမှုများသိမြင်မှုချို့ယွင်း ASD တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူယောက်ျားနှင့်အများဆုံးကိစ္စများတွင်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။
စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးမှကျနော်တို့ကျားသည်နှင့်အညီကိုက်ညီ HCs, အသက်နှင့်ပညာရေးအဆင့်ကိုနဲ့နှိုင်းယှဉ် hypersexual အပြုအမူတွေအဖြစ်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို ASD လူနာတစ်ဦးကြီးများနမူနာအတွက် paraphilic စိတ်ကူးယဉ်နှင့်အပြုအမူစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရည်ရွယ်။
ASD နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကနေတိုက်ရိုက်သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်နှင့်တစ်ဦးပိုကောင်းတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းနမူနာလေ့လာဖို့, သာအသိဉာဏ်ချို့ယွင်းခြင်းမရှိဘဲ ASD နှင့်အတူအရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သည်။ High-functioning အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာသို့မဟုတ် Asperger syndrome ရောဂါနှင့်အတူသာတစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သည်ဖို့ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ဥာဏ်ရည်မသန်စွမ်းများ၏အလားအလာ confounding အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်အရှင်တိုက်ရိုက်လိင်အပေါ် ASD များ၏သက်ရောက်မှုကိုလေ့လာနိုငျရနျခဲ့သညျ။ selfreport ၏အခြေခံတွင်, အားလုံးလူနာ (အနေနဲ့အတွေ့အကြုံရှိစိတ်ရောဂါသို့မဟုတ်စိတ်ပညာရှင်တို့ကရောဂါခဲ့ကြသည်n= 90, Asperger syndrome ရောဂါ; n = 6, atypical အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ); လူနာကသူတို့ ASD ရောဂါလက်ခံရရှိထားတဲ့မှာယုတ်အသက်အရွယ်အနှစ် (; 35.7 နှစ်အကွာအဝေး = 9.1 စံသွေဖည် [SD က] 17 နှစ်ပေါင်း =) 55 ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ASD လူနာအုပ်စုတစ်စု ([M က] = 26.7 ဂိုးသွင်းဆိုလို; SD က = 4.9) HCs ထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားရမှတ်များရှိခဲ့ (M = 6.4; SD က = 3.3) က Autism Spectrum လဒ်က Short Form ကို (aq-SF ၏ဂျာမန်ဗားရှင်းအပေါ်; P57 အားလုံး ASD လူနာနှင့် HCs အဘယ်သူအားမျှ 17 မှတ်များ၏အဆိုပြု cut-off တန်ဖိုးကိုအထက်သွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။57 နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအတွက်သင်တန်းသားများကိုကျား, မ, အသက်အဘို့အလိုက်ဖက်ခဲ့ကြသည်။ နှင့်ပညာရေး၏အနှစ် (ဇယား II ကို) ။
TABLE II ကို။
သင်တန်းသားများကို၏ဝိသေသလက္ခဏာများ။ ASD, အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ spectrum ကိုရောဂါ; HCs ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု; ဎ, နံပါတ်; SD, standared သှဖေ
အဆိုပါဟမ်းဘတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကောင်စီ၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်ဘုတ်အဖွဲ့လေ့လာမှု protocol ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ ASD ရောဂါတစ်ဦးချင်းစီ၏စုဆောင်းမှုအဘို့, ဂျာမနီတစ်လျှောက်လုံး Self-အကူအညီနဲ့အုပ်စုများဆက်သွယ်မေးမြန်းရာနှင့်၎င်းတို့၏သင်တန်းသားများတို့တွင်လေ့လာမှုလက်ကမ်းစာစောင်ဖြန့်ဝေဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။ နောက်ထပ်သင်တန်းသားများကိုတက္ကသိုလ် Medical Center မှဟမ်းဘတ်-Eppendorf, ဂျာမနီမှာအထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာပြင်ပလူနာစင်တာမှတဆင့်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ HCs ဒေသခံကုန်တိုက်ကြီးတွေမှာ, နှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေး၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဆက်အသွယ်မှတဆင့်, ဂျာမနီအတွက်တက္ကသိုလ် Medical Center မှဟမ်းဘတ်-Eppendorf နှင့်တက္ကသိုလ် Medical Center မှ Mainz မှာကြော်ငြာများမှတဆင့်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။
အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ Spectrum လဒ်က Short Form ကို, ဂျာမန်ဗားရှင်း
အဆိုပါ Autism Spectrum လဒ်က Short Form ကို (aq-SF) မေးခွန်းလွှာ၏ဂျာမန်ဗားရှင်း57 အားလုံးပါဝင်သူများအတွက် autistic လက္ခဏာတွေ၏အကဲဖြတ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ 17 တစ်ခုံရမှတ်စိစစ်ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတစ်ဦး cutoff တန်ဖိုးကိုဖြစ်ဖော်ထုတ်နှင့် 88.9% ၏ sensitivity ကိုနှင့်ဂျာမန် validation ကိုနမူနာအတွက် 91.6 များ၏လက်ခံလည်ပတ်မှုဝိသေသလက္ခဏာများကွေး၏ကွေးအောက်မှာဧရိယာနှင့်အတူ 0.92% ၏တိကျတဲ့လြှော့ခဲ့သည်။58
Hypersexual အပြုအမူ Inventory (HBI-19)
အဆိုပါ Hypersexual အပြုအမူ Inventory (HBI-19)58,59 19 ပစ္စည်းများပါဝင်သည်နှင့် hypersexual အပြုအမူတွေကိုအကဲဖြတ်ထားပါသည်။ ပစ္စည်းများအားလုံးတစ်ဦး 5-အမှတ် Likert စကေးအပေါ်ဖြေကြားခံရဖို့ရှိသည်နှင့်ကြားနေကျား phrased နေကြသည်။ 49 အထက်တစ်ရမှတ်ရှိသည်သောသင်တန်းသားများကိုများသောအားဖြင့် hypersexual အဖြစ်ခွဲခြားထားပါသည်။ မေးခွန်းလွှာ၏ဂျာမန်ဗားရှင်းစုစုပေါင်းရမှတ်များအတွက်α = 0.90 တစ်ခုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုက်ညီမှုလြှော့။60
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများနှင့်အပြုအမူ (QSEB) နဲ့ပတျသကျတဲ့မေးခွန်းလွှာ61 120 ပစ္စည်းများပါဝင်သည်နှင့်မိသားစုနောက်ခံ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ကိုရည်မှတ်သတင်းအချက်အလက်အကဲဖြတ်ထားပါသည်။ ထို့ပြင်မေးခွန်းလွှာ (paraphilic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်နှင့်အပြုအမူအပါအဝင်) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်နှင့်အပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်အကဲဖြတ်ထားပါသည်။ အများစုမှာပစ္စည်းများ 12 လကာစူးစမ်းကာလကိုရည်ညွှန်း; ဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများထဲမှာ, မေးခွန်းလွှာသည့်လက်တွေ့လက္ခဏာပစ္စုပ္ပန်ခဲ့ကြာချိန်ကိုသတ်မှတ်ပေးဖို့သင်တန်းသားများကိုမေးတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုအဘို့, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ကြိမ်နှုန်းကိုရည်မှတ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများပူးပေါင်းအဖြစ် paraphilic စိတ်ကူးယဉ်နှင့်အပြုအမူကိုသာပစ္စည်းများ, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသည်။
Group မှခြားနားချက်များΧကိုအသုံးပြုပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်2အမျိုးအစား variable တွေကိုများတွင်စမ်းသပ်မှုများနှင့် tစဉ်ဆက်မပြတ် variable တွေကိုများအတွက်လွတ်လပ်သောနမူနာများအတွက် -tests ။ မျိုးစုံစာရင်းအင်းစမ်းသပ်မှုတူညီတဲ့ data တွေကိုသတ်မှတ်ချက်အပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသောကြောင့်, ကျနော်တို့ဗင်္ယာမိန်အမျိုးအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးယင်းချဉ်းကပ်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးမိစ္ဆာရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှုန်း (FDR) ၏အသုံးပြုမှုကိုမှတဆင့်အမျိုးအစား-ငါအမှား၏စုဆောင်းခြင်းများအတွက်အရေးပါမှုအဆင့်ထိန်းချုပ်ထား! နှင့် llochberg ။62 မျိုးစုံစမ်းသပ်ဘို့ထိန်းချုပ်ခြင်းထဲမှာလျှော့ချဖို့ဦးဆောင် P-value တံခါးခုံကို။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာတညျ့ P-value တံခါးခုံကိုသာအဓိပ်ပာယျ, 0.0158 ခဲ့သည် Pဒီ cutoff အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော -values ​​အဖြစ်သိသာထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ ထိုသို့သောအားဖြင့်, ထို FDR အတွက်အစဉ်အလာကိုသုံး Bonferroni ဆုံးမခြင်းထက်လျော့နည်းရှေးရိုးစွဲဖြစ်၏ သို့သော်ရုံမကြာသေးမီကကြောင့် FDR အထူးသဖြင့်ကျန်းမာရေးနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများထဲမှာ, Bonferroni နည်းလမ်းကျော် preference ကိုလကျခံသင့်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။63
ယောက်ျားထက် (ဎ = 18; 46.2%); ASD နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ, သိသိသာသာပိုပြီးအမျိုးသမီးတွေ (9% ဎ = 16.1) ၏ (ကဆက်ဆံရေးအတွက်လက်ရှိခဲ့ကြသည်P<0.01) ။ ASD နှင့်အတူအမျိုးသမီးများ (n = ll; 27.5%) နှင့်အမျိုးသားများ (n = 8; 14.3%) တွင်သိသိသာသာကွာခြားချက်ကိုမတွေ့ရှိခဲ့ပါ။ ASD တစ် ဦး ချင်းစီကို HCs များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည် HC အမျိုးသမီးများသိသိသာသာပိုမိုများပြားလာကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။n= 31; 79.5%; P> 0.01) နှင့် HC အမျိုးသားများ (n= 47; 82.4%; (P> 0.01) ASD နှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီသည်လက်ရှိတွင်ဆက်ဆံရေးရှိကြ၏ထက်။ ၎င်းတို့၏သားသမီးများရှိသည့်သင်တန်းသားအရေအတွက်တွင်ကွဲပြားခြားနားမှုများမရှိချေ (HCs - n= 7; 7.3%) ။
တိုက်ပိတ်နှင့် dyadic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ
မှာပြထားတဲ့အတိုင်း စားပွဲတင် III ကိုအဘယ်သူမျှမကွဲပြားမှု (တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ကြိမ်နှုန်းအတွက်အမျိုးသမီးသင်တန်းသားများအကြားတွေ့ရှိခဲ့သည်P> 0.05) ။ သို့သော်အမျိုးသမီး HCs များသည် ASD လူနာများထက်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုမကြာခဏဖော်ပြခဲ့သည် (P<0.05) ။ “ အမျိုးသမီးများသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုသင်မည်မျှအကြိမ်ပြုလုပ်လိုသနည်း” ဟူသောမေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အလားတူပုံစံကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ HC အမျိုးသမီးများသည်၎င်းတို့၏ ASD လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထက်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပိုမိုလိုလားကြောင်းဖော်ပြသည် (P
ယောက်ျားအတွက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကြိမ်နှုန်းနှင့် ပတ်သက်. နှင့်အတူ, အထီး ASD ပါဝင်သူ (အထီး HCs ထက်ပိုမကြာခဏတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်P<0.01) ။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းအကြိမ်ရေနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါကဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံကိုတွေ့ရှိရသည်။ HCs က ASD တစ် ဦး ချင်းထက်လိင်ဆက်ဆံမှုနှုန်းပိုမိုမြင့်မားကြောင်းဖော်ပြသည်။ ASD အမျိုးသားများကသူတို့၏ HC ကောင်တာများထက်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပိုမိုလိုလားကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။P<0.05, စားပွဲတင် III ကို).
TABLE III ကို။
ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက high-functioning အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာလူနာတိုက်ပိတ်နှင့် dyadic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ ASD, အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ spectrum ကိုရောဂါ; HCs ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု; NS မဟုတ်ဘဲသိသိသာသာ
အဆိုပါ HBI, ASD လူနာ (HBI တွင်ငှေပေါငျး= 35.1; SD က = 13.7) ကို HCs ထက်သိသိသာသာမြင့်မားတဲ့ပေါင်းလဒ်ရမှတ်ခဲ့ (HBIငှေပေါငျး= 29.1; SD က = 8.7; P<0.001) နှင့်သိသိသာသာပိုမို ASD တစ် ဦး ချင်းစီအဆိုပြုထား cutoff တန်ဖိုး 49 မှတ်၏ရမှတ်များနှင့်ထို့ကြောင့် hypersexual အဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်P<0.01) ။ မှာပြထားတဲ့အတိုင်း စားပွဲတင် IVASD နှင့်အတူအမျိုးသမီးလူနာနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို HCs အကြားမျှထိုကဲ့သို့သောကွဲပြားမှုရှိကြ၏သော်လည်းတစ်ဦး ASD ရောဂါနှင့်အတူယောက်ျား, ပိုပြီး hypersexual အပြုအမူတွေကဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့အပွငျ ASD နှင့်အတူ 17 အထီးတစ်ဦးချင်းစီ 49 မှတ်များ၏ cutoff တန်ဖိုးကိုအထက်သွင်းယူသော်လည်းနှင့်အရှင်အဆိုပြုထား cutoff အထက်သွင်းယူ hypersexual, နှစ်ခုသာအထီး HCs (အဖြစ်ဖော်ပြနိုင်P<0.001) ။ hypersexuality နှုန်းအမျိုးသမီး ASD လူနာများနှင့် HCs အကြားခြားနားချက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
TABLE IV ။
ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက high-လည်ပတ်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာလူနာ hypersexuality နှင့် paraphilias အဘို့အရိပ်လက္ခဏာ။ ASD, အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ spectrum ကိုရောဂါ; HCs ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု; HBI Hypersexual အပြုအမူ Inventory =; max ကို, အများဆုံး; N / A မဟုတ်ဘဲသက်ဆိုင်။ *Pနေဆဲ -values ...
စုစုပေါင်း paraphilic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်နှင့်အပြုအမူအထီး HCs ထက် ASD နှင့်အတူအထီးလူနာအတွက်ပိုပြီးမကြာခဏအစီရင်ခံခဲ့သည်။ မျိုးစုံစမ်းသပ်ဘို့ဆုံးပြီးနောက်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုနေဆဲ masochistic စိတ်ကူးယဉ်, လွန်စွာမှရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စိတ်ကူးယဉ်, voyeuristic စိတ်ကူးယဉ်နှင့်အပြုအမူ, frotteuristic စိတ်ကူးယဉ်နှင့်အပြုအမူများနှင့်အမျိုးသမီးကလေးများနှင့်အတူ pedophilic စိတ်ကူးယဉ်သတင်းပို့တစ်ဦးချင်းစီ၏အရေအတွက်သည်စည်းဝေးကြ၏ (ကြည့်ရှု စားပွဲတင် IV)။ ASD နှင့်အတူအမျိုးသမီးလူနာကပိုအမျိုးသမီး HCs အမျိုးသမီး ASD လူနာထက် masochistic အပြုအမူတွေကိုညွှန်ပြဘယ်မှာ masochistic အပြုအမူတွေ၏ကြိမ်နှုန်းအတွက် မှလွဲ. သူတို့၏ HC counterparts တွေကိုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် paraphilic စိတ်ကူးယဉ်သို့မဟုတ်အပြုအမူ၏ကြိမ်နှုန်းမကွဲပြားမှုပြသခဲ့သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာဖို့, ဒီဟာလိုက်ဖက်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ASD နှင့်အတူ High-functioning တစ်ဦးချင်းစီ၏အဆောင်များတွင်အတွက် hypersexual နှင့် paraphilic စိတ်ကူးယဉ်နှင့်အပြုအမူ၏ကျားမ-တိကျတဲ့ရှုထောင့်စူးစမ်းဖို့ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကတွေ့ရှိချက် ASD နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ HCs ထက်ပို hypersexual နှင့် paraphilic စိတ်ကူးယဉ်နှင့်အပြုအမူပြသသောဖြစ်ကြသည်။
အဓိကအားဖြင့်လိင်ကွဲဖြစ်ခြင်းအဖြစ်မှတ်ပေမယ့်ယခင်သုတေသန, ASD နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အကြံပြု,18 မဟုတ်သော ASD လူဦးရေအတွက်ထက်လိင်တူဆက်ဆံသူသို့မဟုတ်ရိုးရိုး orientation ကိုမြင့်မားမှုနှုန်း (15% အထိ% 35 မှ) ရှိခဲ့သည်။14,64 ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကိုလည်း ASD နှင့်အတူနည်းပါးလာတစ်ဦးချင်းစီ HCs ထက်လိင်ကွဲဖြစ်ခြင်းအစီရင်ခံ; သို့သော်အားလုံး HCs လိင်ကွဲခဲ့ကြခြင်းနှင့်အရှင်ယေဘုယျလူဦးရေနှင့်နှိုင်းယှဉ်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုမှတ်သားခံရဖို့ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအွန်လိုင်းလိင်စစ်တမ်းများတွင်ပါဝင်သူများ၏ 10% စုစုပေါင်းလိင်တူဆက်ဆံသူဖြစ်ခြင်းညွှန်ပြ။65 ကွဲပြားခြားနားသောယူဆချက်ဟာ ASD လူဦးရေအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးအကြောင်းကိုကြပြီ။ ဒီတစ်ခါလည်းကျားရင်ခုန်စရာသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးကန့်သတ် access ကိုများနှင့်ကန့်သတ်အတွေ့အကြုံနှင့်၎င်းတို့၏ရွယ်တူချင်းအတူ sociosexual လဲလှယ်မှုကြောင့်တစ်ဖက်, ရွေးချယ်ရာတွင်အတွက်သက်ဆိုင်ရာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာနှင့်အတူပေါင်းစပ်, ဒီလိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့သို့မဟုတ် preference ကိုတစ်ကန့်သတ်နားလည်မှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်။33,35,37 ထို့အပွငျ ASD တစ်ဦးချင်းစီလိင်တူဆက်ဆံရေးဆီသို့ဖြစ်နိုင်သည်ကိုပိုမိုဒဏ်ခံဖြစ်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားလည်းမရှိ,15 ထိုသို့ ASD တစ်ဦးချင်းစီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကြောင့်လူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်းသို့မဟုတ်ကျားမအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအောက်ပိုင်း sensitivity ကိုမှပိုမိုလွတ်လပ်စွာလူမှုရေးအရလက်ခံခဲ့သည်သို့မဟုတ်တောင်းဆိုဘာသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးစားပေးရှေးခယျြတာဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။15
ASD နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီထက်သိသိသာသာပိုပြီး HCs သိသိသာသာ genderspecific ကွဲပြားမှုနဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ခြင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ ASD နှင့်အတူယောက်ျားထက် ပို. အမျိုးသမီးတွေဆက်ဆံရေးရှိကြ၏။ ကြားဆက်ဆံရေးအဆင့်အတန်းကိုကျားမကွဲပြားခြားနားမှုဆန်းစစ်သည်အခြားလေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကိုအပြီးအပြတ်ကောက်သော်လည်း, ယောက်ျားအလိုရှိကြသည်တွင်ပေမယ့် dyadic ဆက်ဆံရေးကိုပိုမိုအမျိုးသမီးတွေထက် ASD အမျိုးသမီးတွေတစ်ဦးရင်ခုန်စရာနှင့်လိင်ဆက်ဆံရေးအတွက်ပိုပြီးမကြာခဏဖြစ်ကြောင်းတချို့သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။11,31 ယင်းသည် ASD အမျိုးသမီးများပိုမိုအဆင့်မြင့်သောနည်းနာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သောနည်းစနစ်များ (ဥပမာအားဖြင့်သူတို့၏ ASD မဟုတ်သည့်သက်တူရွယ်တူများ၏လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုကိုအတုယူခြင်း) ကြောင့်လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်အဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်သည်။33-36 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်စပ်လျဉ်း ASD နှင့်အတူအမျိုးသမီးတွေလူတစ်ဦး-oriented လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထက်ပိုတိုက်ပိတ်နှင့်၎င်းတို့၏ Non-ASD အမျိုးသမီးများထက်တစ်ဖက်နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံရှိသည်ဖို့လျော့နည်းအလိုဆန္ဒကဖော်ပြခဲ့သည်။ အလားတူပုံစံသည်အခြားလေ့လာမှုများနှင့်အညီဖြစ်သော, ASD ယောက်ျားအတွက်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။12,23,24,33
သို့သော်မကြာခဏတွေ့ရှိရကန့်သတ်လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အာရုံခံ hyposensitivities သို့မဟုတ် hypersensitivities အတူလူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်းလျစ်လျူရှုလိုက်ခြင်းလည်း nonnormative သို့မဟုတ် quantitative အထက်တွင်-ပျမ်းမျှအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေမြားတှငျပါဝငျခွငျးအဘို့အအန္တရာယ်တိုးမြှင့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။22,38 ဒီယူဆချက်အလေးပေးကျနော်တို့ hypersexual အပြုအမူတွေကိုပိုပြီးမကြာခဏ HCs ထက် ASD တစ်ဦးချင်းစီအဘို့အအစီရင်ခံခဲ့တှေ့လြှငျ, သို့သော်ဤကွဲပြားခြားနားမှုအဓိကအားဖြင့်အထီး ASD လူနာအားဖြင့်မောင်းထုတ်ခဲ့သည်, မိန်းမကိုအုပ်စုများအကြားမျှကွဲပြားခြားနားမှုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ hypersexual အပြုအမူတွေ၏တိကျသောမည့်၏အခြေခံတွင်ယခင်လေ့လာမှုများကျန်းမာအထီးဘာသာရပ်များအဘို့အ 3% ကနေ 12% အထိပျံ့နှံ့ခန့်မှန်းချက်တွေ့ပြီ။66-68 နီးပါး 9000 ဂျာမန်တို့သညျလူအွန်လိုင်းမှစစ်တမ်းများတွင် Klein နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ 1% ၏ (12 တစ်လတစ်ကာလအတွင်းတစ်ပတ်လျှင်ထက်ပိုခုနစ်ခု orgasm အဖြစ်သတ်မှတ်) hypersexual အပြုအမူတွေတစ်ပျံ့နှံ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။69 ရှင်းနေသည်မှာဤလူဦးရေ-based ခန့်မှန်းချက်ထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ studyshowed hypersexual အပြုအမူတွေအတွက်ပိုပြီးအထီး ASD ဘာသာရပ်များဖော်ပြသည်။ ဒီတော့ဝေး, ဖာနန်ဒက်စများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကသာ ASD တစ်ဦးချင်းစီအတွက် hypersexual အပြုအမူတွေကိုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ထက်နိမ့်နှုန်းထားတွေ့ပြီ။70 အကဲဖြတ်သည့် 55 High-functioning အထီး ASD တစ်ဦးချင်းစီ၏, 7% တစ်ပတ်လျှင်ထက်ပိုခုနစ်ခုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအဖြစ်သတ်မှတ်, hypersexual အပြုအမူတွေအပေါ်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း, 4% ရှင်းလင်းစွာနံပါတ်များကိုအောက်တွင်ဖြစ်သော 1 နာရီတစ်ရက်ထက်ပိုပြီးအဘို့အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်စေ့စပ်ခဲ့ကြ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်ဖာနန်ဒက်စ et al သူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများသတ်မှတ်ပုံကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ, ထိုသို့သူတို့ရဲ့လေ့လာမှုအတွက်သင်တန်းသားများကိုသာ hypersexual အပြုအမူတွေ၏အောက်ပိုင်းအရေအတွက်ကရှင်းပြ, dyadic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ rated တာဖြစ်နိုင်တယ်။70 ASD ယောက်ျားအတွက် hypersexuality ၏မြင့်မားသောနှုန်းထား၏ဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်းများမသိရသေးရှိနေဆဲပေမယ့်သူတို့ကထပ်တလဲလဲအပြုအမူတွေ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းတွေးဆသို့မဟုတ်အာရုံခံပိုင်ထိုက်သောလွှမ်းမိုးမှုနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့လူတစ်ဦး-oriented နဲ့ Self-oriented လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားခွဲခြားမရသောကြောင့်, ASD ယောက်ျားအတွက် hypersexual အပြုအမူတွေ၏မြင့်မားမှုနှုန်းမှာလည်းအခြားအလေ့လာမှုများနှင့်အမှုအစီရင်ခံစာများမှာတွေ့ရှိထားပြီးဖြစ်သောအလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏တစ်ဦးစကားရပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအလွန်အကျွံ masturbatory အပြုအမူကြောင့်အကန့်သတ်လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်တစ်ဦး dyadic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအတွက်ပါဝငျပြဿနာများ၏ဤအောင်မြင်ရန်နိုင်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ပေမယ့်လိင်တက်ကြွဖြစ်ဖို့အလိုဆန္ဒထင်ဟပ်နိုင်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။14,46-48,52 အမြိုးသမီးမြားနှငျ့ ပတျသကျ. အများကြီးလျော့နည်းသုတေသန hypersexual အပြုအမူတွေ၏ကြိမ်နှုန်းနှင့် ပတ်သက်. နှင့်ကြောင့်သေးငယ်တဲ့နမူနာအရွယ်အစားမှကောက်ယူခဲ့ပြီးပျံ့နှံ့ခန့်မှန်းချက်အထွေထွေသောလူဦးရေအတွက်%4မှ 40% ကနေအထိ။60 အဆိုပါ HBI ၏ဂျာမန် validation ကိုလေ့လာမှုမှာနီးပါး 4.5 အမျိုးသမီးများ၏ 1000% အဆိုပြုထား hypersexuality cutoff အထက်သွင်းယူပါဝင်သည်။59 ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် DSM-5 hypersexual ရောဂါဘို့လယ်ပြင်၌စမ်းသပ်မှုတွေကြောင့်အထူးပြုပြင်ပလူနာပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာမှာအကူအညီရှာကြံအားလုံးလူနာ 5.3% အမျိုးသမီးတွေခဲ့ရှာတွေ့ခဲ့သည်,43 hypersexual အပြုအမူတွေနှုန်းယောက်ျားထက်အမျိုးသမီးတွေအတွက်အများကြီးနိမ့်ဖြစ်အံ့သောငှါညွှန်ပြ။ အမျိုးသမီး ASD လူနာပိုကောင်းလူမှုရေးအရအဆင်ပြေအောင်နှင့်များသောအားဖြင့်လျော့နည်း-အသံထွက် ASD symptomatology (ဥပမာလျော့နည်းထပ်တလဲလဲအပြုအမူတွေကို) ပြသခံရဖို့ပုံရသည်ကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာ hypersexual အပြုအမူတွေလည်းအထီး ASD တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ထက်အမျိုးသမီးအတွက်လျော့နည်းမကြာခဏတွေ့ရှိခဲ့သည်ကြောင်းအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီတော့ဝေး, အ ASD လူဦးရေအတွက် paraphilias အကြောင်းကိုနီးပါးမျှမရှိခဲ့စနစ်တကျလေ့လာမှုများရှိပါသည်64,70; သတင်းအချက်အလက်အများဆုံးဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက်ကနေလာပါတယ်။ ထိုမှတပါး, အားလုံးနီးပါးကိစ္စတွင်လေ့လာမှုများသိမြင်မှုချို့ယွင်းအချို့ကြင်နာတွေနဲ့အထီး ASD တစ်ဦးချင်းစီအတွက် paraphilic အပြုအမူတွေကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း; ထို့ကြောင့်ဤပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုကနေတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရှင်းလင်းစွာကန့်သတ်သည်။ (ကျွန်ုပ်တို့၏အသိပညာမြင့်မား-functioning ASD ယောက်ျားအတွက် paraphilias ကိုင်တွယ်သောသာယခင်လေ့လာမှု) ဖာနန်ဒက်စများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏လေ့လာမှုမှာ paraphilias အများဆုံးမကြာခဏ voyeurism နှင့် fetishism ခဲ့ကြသည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။70 Voyeuristic စိတ်ကူးယဉ်နှင့်အပြုအမူအများဆုံးမကြာခဏပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာ ASD ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အဘို့ paraphilias တွေ့ရှိခဲ့အကြားတွင်လည်းဖြစ်ကြသည်။ ထို့ပြင်မကြာခဏ paraphilias masochistic နှင့်လွန်စွာမှရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စိတ်ကူးယဉ်နှင့်အပြုအမူခဲ့ကြသည်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ တနည်းကား, ဒီထိုကဲ့သို့သောတစ်ဦးချင်းစီလိင်နှိုးဆွဖြစ်လာမှအထက်-ပျမ်းမျှအားဆွလိုအပျကွောငျးကိုညွှန်းသည် ASD လူဦးရေအတွက်သိသာ hyposensitivity တစ်ခုစကားရပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ဖာနန်ဒက်စ et al တစ် paraphilia ၏ဖြစ်ပျက်မှုအနိမ့်သိမြင်မှုစွမ်းရည် paraphilic စိတ်ကူးယဉ်၏ etiology အတွက်အရေးပါသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ဟန်ကြောင်းကိုထုတ်ညွှန်ပြပိုမို ASD လက္ခဏာတွေ, ဉာဏစွမ်းရည်နိမ့်အဆင့်ဆင့်နှင့်သပ္ပါယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအနိမ့်အဆင့်ဆင့်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိ နှင့် ASD အတွက်အပြုအမူတွေ။70 ဒါဟာလူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်းများအသိပညာပေးများနှင့်အမူအကျင့် Self-ထိန်းချုပ်မှု paraphilic အပြုအမူတွေ၏မြင့်မားမှုနှုန်းကိုရှင်းပြ, သိမြင်မှုချို့ယွင်းနှင့်အတူ ASD တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ပင်နိမ့်ကြောင်းတွေးဆနိုင်ပါသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုအများအပြား ASD တစ်ဦးချင်းစီ paraphilic စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ပေမယ့်သိသိသာသာနည်းပါးလာတစ်ဦးချင်းစီကတကယ်တော့ပေးခြင်း paraphilic အပြုအမူတွေပြသသည်, အကြံပြုချက် supporting က high-functioning ASD တစ်ဦးချင်းစီသိမြင်မှုချို့ယွင်းနှင့်အတူ ASD လူနာထက်ပိုမိုမြင့်မား Self-ထိန်းချုပ်မှုစွမ်းရည်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အထွေထွေသောလူဦးရေအတွက် paraphilias အပေါ်ပြန်ကြားရေးအဓိကအားဖြင့်လက်တွေ့သို့မဟုတ်မှုခင်း setting တွင်စုဆောင်းယောက်ျား, ပါဝငျသောလေ့လာမှုများအများစုနှင့်အတူလည်းရှားပါးသည်။71 အထွေထွေသောလူဦးရေအတွက်, မည်သည့် paraphilia ၏ပျံ့နှံ့မှုနှုန်း 0.4% နှင့် 7.7% အကြားဖြစ်ယူဆနေသည်။ 72-75 ဒါ့အပြင်အဆိုပါ QSEB သုံးပြီး Ahlers et al (အသုံးအများဆုံး paraphilic စိတ်ကူးယဉ် voyeuristic ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူမည်သည့် paraphilic စိတ်ကူးယဉ်များအတွက် 59% တစ်မှုနှုန်းနှင့် 44 ဂျာမန်အမျိုးသားများဟာသူတို့ရဲ့ယေဘုယျ-လူဦးရေနမူနာများတွင်မဆို paraphilic အပြုအမူများအတွက် 367% တစ်မှုနှုန်းကိုတွေ့ 35 %), fetishistic (30%), နှင့်လွန်စွာမှရက်စက်ကြမ်းကြုတ် (22%) စိတ်ကူးယဉ်။61 ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာ, အထူးသဖြင့်အထီး ASD တစ်ဦးချင်းစီအဘို့, paraphilic စိတ်ကူးယဉ်နှင့်အပြုအမူများ၏နှုန်းထားများအထွေထွေ-လူဦးရေလေ့လာမှုအရှိဆုံးမှာတွေ့ရတဲ့ပျံ့နှံ့ခန့်မှန်းချက်ထက်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သညျ။ တနည်းကား, ငါတို့သည်ငါတို့၏ ASD လူဦးရေအတွက် paraphilic စိတ်ကူးယဉ်နှင့်အပြုအမူများ၏အကြိမ်ရေအတွက်သိသာကျား, မကွဲပြားမှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုကွဲပြားမှုများအတွက်တစ်ဦးကဖြစ်နိုင်သမျှရှင်းပြချက်မြင့်မားသောလိင် drive ကိုရှိသူများပိုမိုလွယ်ကူစွာဖြင့်သူတို့ကိုဦးဆောင်အချို့လှုပ်ရှားမှုများမှ habituate မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားထွက်သရုပ်ဆောင်၌ဖြစ်စေကြောင်း ASD ယောက်ျားတစ်ဦးပိုမိုအားကောင်းလိင် drive ကိုတစ်ဦးကြီးထွားစွမ်းအင်ကနေတဆင့် paraphilias ၏တည်ရှိမှုဖျန်ဖြေနိုင်ကြောင်းဖြစ်နိုင် ဝတ္ထုလှုပ်ရှားမှုများကြိုးပမ်းရန်။71,76,77 ထို့အပွငျ hypersexuality ကိုလည်း hypersexual အဖြစ် paraphilic အပြုအမူတွေ၏မြင့်မားမှုနှုန်းအကြား link ကိုရှင်းလင်းထားသည့် paraphilic စိတ်ကူးယဉ်သို့မဟုတ်အပြုအမူဆီသို့နိမ့်အခြေခံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရွံရှာသို့မဟုတ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်။77
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုသူတို့တစ်ခုတည်းကိုသာ Self-အစီရင်ခံစာအပေါ်အခြေခံပြီးကြောင့်ကန့်သတ်ထားနှင့်တဦးတည်းအားလုံးပါဝင်သူတစ်ဦးလေ့ကျင့်သင်ကြားစိတ်ပညာရှင်သို့မဟုတ်စိတ်ရောဂါခြင်းဖြင့်ရောဂါခဲ့ကြသည်သေချာမဖွစျနိုငျသညျ။ သို့သော်အားလုံး ASD သင်တန်းသားများကိုသူတို့အသံထွက် ASD symptomatology ပြသသေချာသည် aq ၏ဂျာမန်ဗားရှင်း၏ cutoff တန်ဖိုးကိုအထက်သွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။ ထို့အပွငျ, ရှိသမျှသင်တန်းသားများကိုဆေးပညာစနစ်ဖြင့်မိမိတို့၏အဆက်အသွယ်သူတို့ရဲ့ symptomatology ကြောင့်ခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြ, ASD Self-အကူအညီနဲ့အုပ်စုများသို့မဟုတ် ASD ပြင်ပလူနာပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာမှတဆင့်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုရလဒ်တွေကိုလည်းလိင်-related ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက်ပိုမိုမြင့်မားအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီနှင့်ဖြစ်ကောင်းလည်းပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများရှိခြင်း, အရှင်လေ့လာမှုလူဦးရေထိခိုက်စေ, ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်အားပေးဖို့ပိုဖွယ်ရှိသောအလားအလာများကန့်အသတ်ရှိပါသည်။ ဒါက ASD အုပ်စု hypersexual နှင့် paraphilic စိတ်ကူးယဉ်နှင့်အပြုအမူများ၏အမှန်တကယ်နှုန်းမှာတစ်ဦးကိုပိုမိုမှန်းဆဖို့ဦးဆောင်နိုင်တယ်။ စစ်မှန်တဲ့လျှင်မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ဤကိုလည်း HC အုပ်စုတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြသင့်ပါတယ်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပေမယ့် ASD တစ်ဦးချင်းစီ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်မြင့်မားသောအကျိုးစီးပွားရှိသည်ဖေါ်ပြခြင်းတစ်လိုက်ဖက်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်က high-functioning ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို ASD တစ်ဦးချင်းစီ၏ကြီးမားသောနမူနာအတွက် hypersexual နှင့် paraphilic စိတ်ကူးယဉ်နှင့်အပြုအမူဆနျးစစျဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ် လူမှုရေးနှင့်ရင်ခုန်စရာလုပ်ငန်းဆောင်တာမှာသူတို့ရဲ့သီးခြားချို့ယွင်း, သူတို့ထဲကအတော်များများလည်းအချို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်ထိုက်သောသတင်းပို့ပါ။
ကျနော်တို့သင်တန်းသားများ၏စုဆောင်းမှုကိုထောက်ပံ့၌ကြီးစွာသောအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ခဲ့သူ Stefanie Schmidt ကကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ ထို့အပွငျကြှနျုပျတို့သညျသူတို့သင်တန်းသားများအကြားကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုဖိတ်ကြားချက်ကိုဖြန့်ဝေဖို့ဆန္ဒရှိခဲ့ကြသူအပေါင်းတို့သည် Self-အကူအညီနဲ့အုပ်စုများကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမပြင်ပရန်ပုံငွေလေ့လာမှုအဘို့ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
1 ။ American Psychiatric Association ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲ။ 4th ed ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: American Psychiatric Association; ။ 1994
2 ။ Weintraub K. အဆိုပါပျံ့နှံ့ပဟေဠိ: အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာရေတွက်။ သဘာဝ။ 2011;479(7371):22–24. [PubMed]
3 ။ loom R. , Hull ကအယ်လ်မန်ဒီ WPL ။ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ spectrum ကိုရောဂါအတွက်အထီး-to-အမျိုးသမီးအချိုးအစားကဘာလဲ? တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့် Meta-analysis သည်။ J ကို Am Acad ကလေးမြီးကောင်ပေါက်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2017;56(6):466–474. [PubMed]
4 ။ Halladay AK ။ , ဆရာတော်အက်စ်, Constantino ဖြစ်မှု။ , et al ။ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ spectrum ကိုရောဂါအတွက်လိင်နှင့်ကျား, မကွဲပြားမှု: သက်သေအထောက်အထားများကွာဟချက်စုစည်းတင်ပြရန်နှင့်ဦးစားပေး၏ထွန်းသစ်စသောဒေသများတွင်ဖော်ထုတ်။ Mol Autism ။ 2015; 6: 1-5 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
5 ။ Stokes MA, Kaur အေ High-functioning အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာများနှင့်လိင်: ။ တစ်မိဘရှုထောင့်။ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ။ 2005;9(3):266–289. [PubMed]
6 ။ Howlin P. , Mawhood L. , Rutter အမ် Autism နှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလက်ခံဘာသာစကားရောဂါ-တစ်အစောပိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူအသက်တာ၌နောက်ဆက်တွဲနှိုင်းယှဉ်။ II ကို: လူမှုအပြုအမူဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ရောဂါရလဒ်များ။ J ကိုကလေး Psychol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2000;41(5):561–578. [PubMed]
7 ။ Seltzer MM ။ , Krauss မဂ္ဂါဝပ်။ , Shattuck PT ။ , Orsmond G. အ, ဆွေအေ, သခင် C. မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအတွက်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာရောင်စဉ်ပုံမမှန်ခြင်း၏ရောဂါလက္ခဏာများ။ J ကို Autism Dev မှ disorders ။ 2003;33(6):565–581. [PubMed]
8 ။ ဗန် Bourgondien ME ။ , Reichle NC ။ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာနှင့်အတူလူကြီးများအတွက် Palmer ကအေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ J ကို Autism Dev မှ disorders ။ 1997;27(2):113–125. [PubMed]
9 ။ ရူဘယ် LA က။ , Dalrymple NJ ။ တစ်မိဘရှုထောင့်: အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာတွေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ၏လူမှု / လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာ။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 1993;22(3):229–240. [PubMed]
10 ။ Konstantareas MM ။ , Lunsky YJ ။ Sociosexual အသိပညာ, autistic ရောဂါနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာနှောင့်နှေးနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ၏အတွေ့အကြုံ, သဘောထားများနှင့်အကျိုးစီးပွား။ J ကို Autism Dev မှ disorders ။ 1997;27(4):397–413. [PubMed]
11 ။ Ousley Oy ။ , Mesibov GB အထိ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာနှင့်အတူ High-functioning ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးအသိပညာ။ J ကို Autism Dev မှ disorders ။ 1991;21(4):471–481. [PubMed]
12 ။ Byers ES ။ , Nichols အက်စ်, Voyer SD က။ စိန်ခေါ်မှုကျပုံစံ: မြင့်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာအထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ spectrum ကိုရောဂါနှင့်အတူတစ်ခုတည်းသောအရွယ်ရောက်ပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာ။ J ကို Autism Dev မှ disorders ။ 2013; 43: 2617-2627 ။ [PubMed]
13 ။ Byers ES ။ , Nichols အက်စ်, Voyer SD က။ , တစ်ဦးရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ရပြီသူအထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာရောင်စဉ်အပေါ်က high-functioning အရွယ်ရောက်သူတစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းနမူနာ၏ Reilly G. အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာ။ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ။ 2013;17(4):418–433. [PubMed]
14 ။ Haracorps ဃ, ​​Pedersen L. လိင်နှင့် Autism: ဒိအစီရင်ခံစာ။ http://www.autismuk.com/autisrn/sexuality-and-autism/sexuality-andautism-danish-report/ ။ မှာရရှိနိုင် မေလ 1992 ထုတ်ဝေသည်။ ကိုပင်ဟေဂင်, ဒိန်းမတ်။
15 ။ Dewinter ဂျေ, Vermeiren R. , Vanwesenbeeck ဗြဲ, Lobbestael ဂျေ, ဗန် Nieuwenhuizen C. လိင်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ spectrum ကိုရောဂါနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများအတွက်: Self-အစီရင်ခံအပြုအမူတွေနဲ့သဘောထားတွေ။ J ကို Autism Dev မှ disorders ။ 2014;45(3):731–741. [PubMed]
16 ။ Dewinter ဂျေ, Vermeiren R. , Vanwesenbeeck ဗြဲ, ထကြီးထွားလာအထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ spectrum ကိုရောဂါနှင့်အတူဗန် Nieuwenhuizen C. ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ယောက်ျားလေးများ: Self-အစီရင်ခံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏နောက်ဆက်တွဲ။ EUR ကလေးမြီးကောင်ပေါက်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2016;25(9):969–978. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
17 ။ Dewinter ဂျေ, Vermeiren R. , Vanwesenbeeck ဗြဲ, အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ spectrum ကိုရောဂါနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံဗန် Nieuwenhuizen C. မိဘအသိပညာပေး။ J ကို Autism Dev မှ disorders ။ 2015;46(2):713–719. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
18 ။ Dewinter ဂျေ, Vermeiren R. , Vanwesenbeeck ဗြဲ, ဗန် Nieuwenhuizen C. Autism နှင့်စံတန်ဖိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖှံ့ဖွိုးတိုး: တစ်ဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်။ J ကို Clin သူနာပြု။ 2013;22(23-24):3467–3483. [PubMed]
19 ။ Koller R. လိင်နှင့်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာတွေနဲ့မြီးကောင်ပေါက်။ လိင် Disabil ။ 2000;18(2):125–135.
20 ။ Henault ဗြဲ Asperger ရဲ့ရောဂါနှင့်လိင်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် မှစ၍ လူကြီးဘဝအထိ။ လန်ဒန်, ဗြိတိန်နှင့် Philadelphia တွင်, PA: ဂျက်စီကာ Kingsley ထုတ်ဝေ။ 2006
21 ။ Bejerot အက်စ်, Eriksson JM ။ တစ်ဦးအမှုထိန်းချုပ်ရေးလေ့လာမှု: အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ spectrum ကိုရောဂါအတွက်လိင်နှင့်ကျားမအခန်းကဏ္ဍ။ PLoS တစ်ခုမှာ။ 2014;9(1): e87961 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
22 ။ ဘရောင်း-Lavoie သည် SM ။ , Viecili MA ။ , Weiss ဂျေအေ။ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ spectrum ကိုမမှန်နှင့်အတူအရွယ်ရောက်သူများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာနှင့်သားကောင်။ J ကို Autism Dev မှ disorders ။ 2014;44(9):2185–2196. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
23 ။ Byers ES ။ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ spectrum ကိုရောဂါနှင့်အတူ High-functioning အရွယ်ရောက်ပြီး, Nichols အက်စ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု။ လိင် Disabil ။ 2014;32(3):365–382.
24 ။ Cottenceau အိပ်ချ်, Roux အက်စ်, Blanc R. , Lenoir P. , Bonnet-Brilhault အက်ဖ်, အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ spectrum ကိုမမှန်နှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက်၏အသက်ဘာသယ်လဲမီ C. အရည်အသွေး: ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက်မှနှိုင်းယှဉ်။ EUR ကလေးမြီးကောင်ပေါက်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2012;21(5):289–296. [PubMed]
25 ။ Dekker LP သို့။ , et al ။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲရွယ်တူချင်းနှိုင်းယှဉ်လျှင်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ spectrum ကိုရောဂါနှင့်အတူသိမှု-နိုင်ခဲ့မြီးကောင်ပေါက်များ၏ Psychosexual လည်ပတ်: psychosexual လုပ်ငန်းဆောင်တာအပေါ်တစ်ဦးကိုယ်ပိုင်နှင့်မိဘအစီရင်ခံစာမေးခွန်းလွှာ inventory- အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်အကူးအပြောင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်စမ်းသပ်ခြင်း။ J ကို Autism Dev မှ disorders ။ 2017;47(6):1716–1738. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
26 ။ Dewinter ဂျေ, Vermeiren R. , Vanwesenbeeck ဗြဲ, ထကြီးထွားလာအထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ spectrum ကိုရောဂါနှင့်အတူဗန် Nieuwenhuizen C. ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ယောက်ျားလေးများ: Self-အစီရင်ခံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏နောက်ဆက်တွဲ။ EUR ကလေးမြီးကောင်ပေါက်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2016;25(9):969–978. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
27 ။ Gilmour L. , Schalomon pm တွင်။ , အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ spectrum ကိုရောဂါနှင့်အတူအရွယ်ရောက်သူတစ်ဦးလူထုအခြေပြုနမူနာထဲမှာစမစ် V. လိင်။ res Autism Spectr disorders ။ 2012;6(1):313–318.
28 ။ ဟန္န LA က။ , Stagg SD က။ လိင်ပညာရေးနှင့်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ spectrum ကိုရောဂါနှင့်အတူငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာ၏အတွေ့အကြုံများကို။ J ကို Autism Dev မှ disorders ။ 2016; 46: 3678-3687 ။ [PubMed]
29 ။ မေလတီ, Pang KC, Williams က K. အကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခံစာ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုနဲ့အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်အတွက်ဆက်ဆံရေး။ J ကို Autism Dev မှ disorders ။ 2017;47(6):1910–1916. [PubMed]
30 ။ Mehzabin P. , Stokes MA ။ High-လည်ပတ်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာနှင့်အတူငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက် self-အကဲဖြတ်လိင်။ res Autism Spectr disorders ။ 201 1;5(1):614–621.
31 ။ Strunz အက်စ်, Schermuck C. , Ballerstein အက်စ်, Ahlers CJ ။ , Dziobek ဗြဲ, Asperger syndrome ရောဂါနှင့်မြင့်မားသော-functioning အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာနှင့်အတူအရွယ်ရောက်သူတို့တွင်အ Roepke အက်စ်ရိုမန်းတစ်ဆက်ဆံရေးနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု။ J ကို Clin Psychol ။ 2017;73(1):113–125. [PubMed]
32 ။ ASDs နှင့်အတူမိန်းကလေး Nichols အက်စ်ကျန်းမာရေးလိင်။ ခုနှစ်တွင်: Nichols က S, Moravcik GM က, Tetenbaum P ကို, eds ။ မိန်းကလေးများဟာ Autism Spectrum အပေါ်ကြီးပြင်း: အ Pre-ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အကြောင်းသိထားသင့်အဘယျသို့မိဘများနှင့်ပညာရှင်များ။ လန်ဒန်, ဗြိတိန် Philadelphia တွင်, PA: ဂျက်စီကာ Kingsley ထုတ်ဝေ; 2009: 204-254 ။
33 ။ လိုင်အမ်, Lombardo သင်္ဘော MV ။ , Pasco G. အ, et al ။ မြင့်မားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာအထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာရောင်စဉ်အခြေအနေများနှင့်အတူယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအရွယ်ရောက်သူတစ်ဦးကအမူအကျင့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်။ PLoS တစ်ခုမှာ။ 2011;6(6): e20835 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
34 ။ ဦးခေါင်းလေး။ , McGillivray ဂျေအေ။ , Stokes MA ။ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ spectrum ကိုမမှန်နှင့်အတူသားသမီးများအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လူပေါင်းကောင်းသောအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု။ Mol Autism ။ 2014;5(1): 19 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
35 ။ မန်ဒီဒဗလျူ, Chilvers R. , ချောင်ဒရီ U. , Salter G. အ, Seigal အေ, အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ spectrum ကိုရောဂါအတွက် Skuse ဃလိင်ကွဲပြားမှု: ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးကြီးများနမူနာအနေဖြင့်အထောက်အထား။ J ကို Autism Dev မှ disorders ။ 2012;42(7):1304–1313. [PubMed]
36 ။ ဗန် Wijngaarden-Cremers PJM, ဗန် Eeten အီး, Groen သည့် WB, ဗန် Deurzen PA ဆိုပြီးအထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ spectrum ကိုမမှန်အတွက်ချို့ယွင်း၏အဓိက triad အတွက် Oosterling IJ, ဗန် der Gaag R. ကျားများနှင့်အသက်အရွယ်ကွဲပြားခြားနားမှု: ။ ။ ။ ။ စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့် meta -ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ J ကို Autism Dev မှ disorders ။ 2014;44(3):627–635. [PubMed]
37 ။ Pecora LA က။ , Mesibov GB ကို။ , Stokes MA ။ စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့် Meta-analysis သည်: High-functioning အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာအတွက်လိင်။ J ကို Autism Dev မှ disorders ။ 2016;46(11):3519–3556. [PubMed]
38 ။ Stokes အမ်နယူတန် N. , Kaur အေအညှာနှင့်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ spectrum ကိုရောဂါနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအကြားလူမှုရေးနှင့်ရင်ခုန်စရာလုပ်ငန်းဆောင်တာ။ J ကို Autism Dev မှ disorders ။ 2007;37(10):1969–1986. [PubMed]
39 ။ အိပ်ခန်းထဲမှာ Aston အမ် Asperger syndrome ရောဂါ။ လိင် Relatsh Ther ။ 2012;27(1):73–79.
40 ။ Kafka အမတ်။ Hypersexual ရောဂါ: DSM-V ကိုများအတွက်အဆိုပြုရောဂါ။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2010;39(2):377–400. [PubMed]
41 ။ hypersexual သို့မဟုတ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ Krueger R. Diagnosis အမေရိကန်စိတ်ရောဂါ Association ကဒီရောဂါ၏ငြင်းပယ်ခံရရှိနေသော်လည်း ICD-10 နှင့် DSM-5 သုံးပြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်။ စွဲလမ်း။ 2016;111(12):2110–2111. [PubMed]
42 ။ Turner ဃ, Schöttleဃ, ဘရက်ဖို့ဒဂျေ, Briken P. အကဲဖြတ်နည်းလမ်းများနှင့် hypersexuality နှင့် paraphilic မမှန်၏စီမံခန့်ခွဲမှု။ Curr Opin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2014;27(6):413–422. [PubMed]
43 ။ ရိဒ် RC ။ , လက်သမား BN ။ , Hook ဖြစ်မှု။ , et al ။ hypersexual ရောဂါများအတွက် DSM-5 လယ်ကိုရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်တွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာ။ J ကိုလိင် Med ။ 2012;9(11):2868–2877. [PubMed]
44 ။ American Psychiatric Association ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲ။ 5th ed ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: American Psychiatric Association; 2013
45 ။ ရိဒ် GM က။ , Drescher ဂျေ, Krueger RB ။ , et al ။ အဆိုပါ ICD-11 အတွက်လိင်နှင့်လိင်ကွဲပြားမှုဝိသေသလက္ခဏာနှင့်ဆက်စပ်သော disorders: လက်ရှိသိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထား, အကောင်းဆုံးလက်တွေ့အလေ့အကျင့်များနှင့်လူ့အခွင့်အရေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားအပေါ်အခြေခံပြီး ICD-10 ခွဲခြားထပ်မံစိစစ်တည်းဖြတ်။ ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2016;15(3):205–221. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
46 ။ Hergünerအက်စ်, Herguner အေ, အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာနှင့်ဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးအတွက်မသင့်လျော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေများအတွက် risperidone နှင့် paroxetine ၏ Cicek အီးပေါင်းစပ်။ Arch Neuropsychiatry ။ 2012; 49: 311-313 ။
47. Shahani L. Asperger ၏ရောဂါတွင်လိင်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများအတွက် lithium ကိုအသုံးပြုခြင်း။ J ကို Neuropsychiatry Clin neuroscience ။ 2012; 24 (4): E17 ။ [PubMed]
48 ။ ငုယင်အမ်, အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးအတွက်အလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဘို့ Murphy က T. Mirtazapine ။ J ကို Am Acad ကလေးမြီးကောင်ပေါက်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001;40(8):868–869. [PubMed]
49 ။ Deepmala ဃ, အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးအတွက် hypersexual အပြုအမူများအတွက် propranolol ၏ Agrawal အမ်အသုံးပြုခြင်း။ အမ်း Pharmacother ။ 2014;48(10):1385–1388. [PubMed]
50 ။ Muller JL ။ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာအတွက် sadomasochism နှင့် hypersexuality ကိုတွေ့ရှိရပါသည် amygdalohippocampal ဆက်စပ်နေပါသလား? J ကိုလိင် Med ။ 2011;8(11):3241–3249. [PubMed]
51 ။ Coshway L. , Broussard ဂျေ, Acharya K. , et al ။ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ spectrum ကိုဖရိုဖရဲနဲ့ဆယ်ကျော်သက်များတွင်မသင့်လျော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေများအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကုထုံး။ ကလေးအထူးကု။ 2016; 137 (4): e20154366 ။ [PubMed]
52 ။ Realmuto GM က။ , ရူဘယ် LA က။ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ: ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ပြဿနာများကို။ J ကို Autism Dev မှ disorders ။ 1999;29(2):121–127. [PubMed]
53 ။ Fosdick C. , Mohiuddin အက်စ်ဖြစ်ရပ်မှန်သတင်းပို့: leuprolide acetate အသုံးပြုမှုစဉ်အတွင်းတစ်ကြီးထွားမသန်စွမ်းဆယ်ကျော်သက်များတွင်ပြင်းထန်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်၏ resolution ကို။ J ကို Autism Dev မှ disorders ။ 2016;46(6):2267–2269. [PubMed]
54 ။ Dozier CL ။ , Iwata BA ဘွဲ့။ , Worsdell AS ။ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာနှင့်အတူတစ်ဦးသောသူအားဖြင့်ပြသခြေလျင်-ဖိနပ် fetish ၏အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆံမှု။ J ကို Apple ကနျစှာနထေိုစအို။ 2011;44(1):133–137. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
55 ။ အစောပိုင်း MC ။ , နိုင်ကြောင်း CA. , Wink LK ။ , McDougle CJ ။ , Scott EL ။ ဖြစ်ရပ်မှန်အစီရင်ခံစာ: အမျိုးသမီးခြေနှင့်အဆက်မပြတ်နှင့်အတူ autistic ရောဂါနှင့်အတူ 16 နှစ်အရွယ်အထီး။ J ကို Autism Dev မှ disorders ။ 2012;42(6):1133–1137. [PubMed]
56 ။ ဆေးလ်ဗားဂျေအေ။ , Leong GB ကို။ , Ferrari ပြိုင်ကားဟာ MM ။ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ spectrum ကိုရောဂါတစ်ခုကိစ္စတွင် Paraphilic psychopathology ။ J ကို Forensic စိတ်ရောဂါကုသမှုဖြစ်၏။ 2003;24(3):5–20.
57. Freitag CM ။ , Retz-Junginger P. , Retz ဒဗလျူ။ Autismus-Spektrum-Quotienten (AQ) ဗဟုသုတ - Kurzversion AQ-k သေသည်။ Klin Psychol und Psychother ။ 2007; 36: 280-289 ။
58 ။ ရိဒ် RC ။ , Garo အက်စ်, လက်သမား BN ။ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု, တရားဝင်မှု, ယောက်ျားတစ်ဦးပြင်ပလူနာနမူနာအတွက် Hypersexual အပြုအမူ Inventory ၏ psychometric ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ လိင်စွဲ compulsive ။ 2011;18(1):30–51.
59 ။ Klein V. , Rettenberger အမ်, Boom KD ။ , Briken P. [ဂြာမနျတွင်] က hypersexual အပြုအမူ၏ဂျာမန်ဗားရှင်းတစ်ဦးကအတည်ပြုလေ့လာမှု။ Psychother Psychosom Med Psychol ။ 2014;64(3-4):136–140. [PubMed]
60 ။ Klein V. , Rettenberger အမ်, Briken P. ကိုယ်ပိုင်အစီရင်ခံ hypersexuality ၏ညွှန်းကိန်းများနှင့်အမျိုးသမီးအွန်လိုင်းနမူနာ၎င်း၏ဆက်စပ်။ J ကိုလိင် Med ။ 2014;11(8):1974–1981. [PubMed]
61 ။ Ahlers CJ ။ , Schaefer GA ။ , Mundt်IA ။ , et al ။ paraphilias ရဲ့ contents ဘယ်လိုပုံမှန်မဟုတ်သောရှိပါသလဲ ယောက်ျားတစ်ဦးလူထုအခြေပြုနမူနာအတွက် Paraphilia-ဆက်စပ်လိင်စိတ်နိုးထပုံစံများ။ J ကိုလိင် Med ။ 2011;8(5):1362–1370. [PubMed]
62 ။ မျိုးစုံစမ်းသပ်ဖို့လက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်အစွမ်းထက်ချဉ်းကပ်: Benjamini Y. , Hochberg Y. မိစ္ဆာရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှုန်းကိုထိန်းချုပ်ခြင်း။ JR Stat Soc SER ခ 1995;57(1):289–300.
63 ။ Glickman ME ။ , Rao က SR ။ , Schultz MR ။ မမှန်သောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှုန်းကိုထိန်းချုပ်ကျန်းမာရေးလေ့လာမှုများအတွက် Bonferroni-type အမျိုးအစားချိန်ညှိဖို့အကြံပြုအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ J ကို Clin Epidemiol ။ 2014;67(8):850–857. [PubMed]
64 ။ Hellemans အိပ်ချ်, Colson K. , Verbraeken C. , Vermeiren R. , အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ spectrum ကိုရောဂါနှင့်အတူ High-functioning အထီးမြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူငယ်လူကြီးများအတွက် Deboutte ဃလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ J ကို Autism Dev မှ disorders ။ 2007;37(2):260–269. [PubMed]
65 ။ Shaeer O. , သက်သက် K. အဆိုပါ Global အွန်လိုင်းလိင်စစ်တမ်း: 2011 အတွက်အမေရိကန်ယူနိုက်တက်စတိတ်: အင်္ဂလိပ်စကားပြောလူတို့တွင်လိင်တူဆက်ဆံခြင်း။ Hum Androl ။ 2015;5(3):45–48.
66 ။ Kinsey AC အ။ , Pomeroy သည့် WB ။ , မာတင်အီး။ , Sloan အက်စ် လူ့အမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ IN Bloomington: Indiana ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်စာနယ်ဇင်း; 1948
67 ။ Atwood JD ။ , ကောလိပ်လူငယ်အတွက် Gagnon ဂျေ Masturbatory အပြုအမူ။ J ကိုလိင်ပညာရေး Ther ။ 1987;13(2):35–42.
68 ။ Långström N. , Hanson RK ။ အထွေထွေသောလူဦးရေအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အမြင့်နှုန်းထားများ: ဆက်စပ်မှုနှင့်ခန့်မှန်း။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2006;35(1):37–52. [PubMed]
69 ။ Klein V. , Schmidt က AF ။ , Turner ဃ, Briken P. အထီးအသိုင်းအဝိုင်းနမူနာအတွက် pedophilic အကျိုးစီးပွားနှင့်ကလေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်လိင် Drive နှင့် hypersexuality ရှိပါသလား PLoS တစ်ခုမှာ။ 2015; 10 (1): e0129730 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
70 ။ ဖာနန်ဒက်စ LC ။ , Gillberg CI ။ , Cederlund အမ်, Hagberg ခ, Gillberg C. , ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွက်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ spectrum ကိုမမှန်ရောဂါမြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများအတွက်လိင်၏ Billstedt အီး aspect ။ J ကို Autism Dev မှ disorders ။ 2016;46(9):3155–3165. [PubMed]
71 ။ Dawson SJ ။ , Bannerman BA ဘွဲ့။ , Lalumiere ML ။ Paraphilic အကျိုးစီးပွား: တစ် nonclinical နမူနာများတွင်လိင်ကွဲပြားမှုတစ်ခုစာမေးပွဲ။ လိင်အလွဲသုံးမှု။ 2016;28(1):20–45. [PubMed]
72 ။ Långström N. , Seto MC ။ ဆွီဒင်အမျိုးသားလူဦးရေစစ်တမ်းများတွင် Exhibitionistic နှင့် voyeuristic အပြုအမူ။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2006;35(4):427–435. [PubMed]
73 ။ Långström N. , Zucker KJ ။ အထွေထွေသောလူဦးရေအတွက် Transvestic fetishism: ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှု။ J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 2005;31(2):87–95. [PubMed]
74 ။ ရစ်ချတာဂျေ, Grulich AE ။ , က de Visser ro ။ , Smith ကလေး။ , Rissel အီး။ သြစတြေးလျအတွက်လိင်: အရွယ်ရောက်သူတစ်ဦးကိုယ်စားလှယ်နမူနာဖြင့်စေ့စပ်, autoerotic esoteric နှင့်အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်။ Aust NZJ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး။ 2003;27(2):180–190. [PubMed]
75 ။ Joyal CC ကို, Carpentier ဂျေအထွေထွေသောလူဦးရေအတွက် paraphilic အကျိုးစီးပွားနှင့်အပြုအမူများ၏ပျံ့နှံ့။ တစ်ပြည်နယ်စစ်တမ်း။ J ကိုလိင် Res ။ 2017;54(2):161–171. [PubMed]
76 ။ Baumeister RF ။ , Catanese KR ။ , Vohs KD ။ လိင် drive ကို၏အစွမ်းသတ္တိကိုတစ်ဦးကျား, မကွာခြားချက်ရှိပါသလား? သီအိုရီအမြင်များ, အယူအဆဘာသာဂုဏ်ထူးနှင့်သက်ဆိုင်ရာသက်သေအထောက်အထားများ၏သုံးသပ်ချက်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Soc Psychol ဗျာ 2001;5(3):242–273.
77 ။ de Jong က PJ ။ , ဗန် Overveld အမ်, Borg C. arousal အတွက်ပေးခြင်းသို့မဟုတ်ရွံရှာထဲမှာညပ်တည်းခို? လိင်နှင့်လိင်ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်ရွံရှာ-based ယန္တရားများ။ J ကိုလိင် Res ။ 2013;50(3-4):247–262. [PubMed]